राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग दिवस आज मनाइदै, सुदुरपश्चिममा नयाँ सङ्क्रमण दर घटेपनि एड्सको जोखिम कायमै
स्टुडियो टाईम : १२:५७
कञ्चनपुरमा भरुवा बन्दुकसहित पाँचजना पक्राउ
बैतडीका १२ स्थानमा ट्राफिक जाँच
टुङ्गो लागेन एकीकरणको प्रक्रिया
२०७४ मङ्सिर १५ शुक्रबार १२:५७
राष्ट्रिय एड्स तथा यौनरोग दिवस आज मनाइदैछ । यौनरोग सरकारी र गैरसरकारी ससथाहरुले आज विभिन्न् कार्यक्रम गरि यो दिवस मनाउँदैछन् । यौनरोग नियन्त्रण केन्द्रले देशभर एचआइभी एड्स संक्रमितको संख्या ३२ हजार ७३५ रहेको जनाएको छ । अघिल्ला वर्षको तुलनामा संक्रमितको संख्या घट्दै गएको छ ।
विश्व एड्स दिवस ‘मेरो स्वास्थ्य मेरो अधिकार’ भन्ने नारासहित मनाइँदै छ । नेपालमा २० हजार २३२ पुरुष र १२ हजार ५३ महिला एचआइभी संक्रमित छन् । ‘सन् २००५ देखि १६ सम्ममा विश्वव्यापी रूपमा एचआइभी एड्सका कारण मृत्यु हुनेको संख्या ४८५ ले कमी आएको छ ।
७० प्रतिशत संक्रमण असुरक्षित यौनसम्पर्कबाट हुने गरेको पाइएको छ । एचआइभी रोकथामका लागि सरकारले यस वर्ष ५० करोड र निःशुल्क औषधिका लागि १४ करोड विनियोजन गरेको छ ।
सुदुरपश्चिममा नयाँ सङ्क्रमण दर घटेपनि एड्सको जोखिम कायमै ..
नयाँ सङ्क्रमण दर घटेपनि सुदुरपश्चिममा प्राणघातक एचआइभी एड्सको जोखिम कायमै नयाँ सङ्क्रमण दर घटेपनि सुदुररपश्चिममा प्राणघातक एचआइभी एड्सको जोखिम कायमै रहेको छ । बेरोजगारीको समस्याबाट गुज्रेका पुरुषहरु भारतको मुम्बई लगायतका सहरमा कामका लागि जाने र असुरक्षित यौन सम्पर्क गरी उतैबाट एड्स बोकेर आउने विद्यमान परिपाटीका कारण यो रोगको जोखिम टर्न नसकेको हो
भारतबाटै एड्स बोकेर आउने र परिवारमा पनि सार्ने प्रवृत्तिले न्युनीकरणमा चुनौती देखिएको हो । सरकारी तथा गैरसरकारी सहयोगी निकायको ठुलो लगानीका बाबजुद पनि एचआइभी एड्स न्यूनीकरणमा चुनौती देखिएको भन्दै स्वास्थ्यकर्मीले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । मुलुकमा बेरोजगारी समस्याका साथै मुम्बई जाने बाध्यताको अन्त्य नभएसम्म एचआइभी एड्स न्यूनीकरण चुनौतीकै रुपमा रहि रहको सेती अञ्चल अस्पतालका निमित्त मेडिकल स’परिटेण्डेण्ट डा. कपिल गौतमले बताउनुभयो ।
उतैबाट एड्स सङ्क्रमित भएर आउने परुषले आफ्नो श्रीमतीलाई रोग सार्ने काम गरिरहेका छन् । उनीहरुबाट जन्मने बच्चा पनि जन्मजात एड्सको सङ्क्रमण स्वीकार्न बाध्य छन् । विगतमा म’ल’कमै सबैभन्दा बढी एचआइभी एड्स सङ्क्रमित देखिएको स’द“र पश्चिममा हाल आएर नयाँ सङ्क्रमण र म’त्य’दर घटेको छ . रोकथाम र उपचरात्मक रणनीति अपनाएर एचआइभी न्य“नीकरणको प्रयासलाई सरकारी र गैरसरकारी निकायले अगाडि बढाइरहेका छन् ।
जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय कैलालीका अनुसार हालसम्म कैलालीमा तीन हजार ४)३ जना एचआइभी सङ्क्रमित दर्ता भएका छन् . जसमध्ये महिला एक हजार ५३४, पुरुष एक हजार ४८५, बालबालिका ३७४ र १ जना तेस्रो लिङ्गी रहेका छन् । दर्ता भएकामध्ये हाल एक हजार ८ सङ्क्रमितले नियमित एआरटी सेवा लिइरहेका जनाइएको छ ।
एचआइभी न्यूनीकरणका लागि अहिले रोकथाम तथा उपचारका साथै बिरामीलाई परामर्श दिने काम पनि भइरहेको जनस्वास्थ्य कार्यालयका जनस्वास्थ्य निरीक्षक महेन्द्र चन्दले बताउनुभयो । सुदुरपश्चिममा नयाँ रोगी फेला पर्ने दरमा कमी आएसंगै एड्स सङ्क्रमित विरामीको मृत्यु हुने दर घटेको जनाइएको छ ।
अछामको साँफेबगर बिमानस्थल १३ वर्षपछि नियमित सञ्चालनमा